Okwamanje, izidingo abathengi JSC "KAMAZ" ukhiqiza umfuziselo iloli esindayo wonke amasondo imoto KAMAZ-6522. Isici esiphawulekayo kule modeli kuyinto drive edonsa ngawo wonke amasondo, efana wezempi off-road izimoto. Ukuthuthukiswa imoto ngenxa yezimo sezimoto, ngokuvamile ikhona ekukhiqizeni izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba amaminerali, kanye ezindaweni lomsebenzi wokwakha. Ngaphandle, imoto has a ukufana okukhulu nge imodeli KAMAZ-6520, ukwaba ukuphakama xaxa ngenxa umehluko ngaphambili oluvala amasondo.
Iphesenti elikhulu izingxenye olunikezwe yi abakhiqizi eziholela. Ngokwesibonelo, umphakeli ukuwudlulisa ukudluliswa icala siqinile. Ngakho kungenzeka ukuba ahlinzeke ukwanda ukuthembeka yokulahla iloli KAMAZ-6522, intengo Ngakho waqhubeka sezingeni elamukelekile, ngaphandle ukuncipha eziphawulekayo inzuzo ekusebenzeni cishe yonke imikhakha isicelo. Ehlongozwayo ngu ZF imodeli 16S151 gearbox has izigaba 16 optimality enkulu e umthwalo injini, kuye ngokuthi izimo ukushayela. Nokho, kufanele kuphawulwe ezinye ngokuphazamisa lisetshenziswa uma ushintshela ingalo, ikakhulukazi ngesikhathi igiya 7th futhi 8, kungakhathaliseki isikhundla ehlukanisayo.
Futhi phakathi izici imodeli KAMAZ-6522 kubalulekile ukuphawula ukusetshenziswa phambi inkampani "Madara" kwebhuloho (Bulgaria), ukuklanywa okuyinto ukhetha ukusebenzisa double emalungeni jikelele. Kukhethwa imikhiqizo oluvala amasondo phambi nomkhiqizi angaphandle ube nesilinganiso esifanele, njengoba kungekho self-ezenziwe nge edingekayo umthamo ethwele.
Olwenziwe ucwaningo eziyinkimbinkimbi kanye nomsebenzi nentuthuko, ukutadisha isipiliyoni yokusebenza amasampuli langaphambilini, kanye nezimoto ezivezwa nezinye abakhiqizi iye yathuthuka kakhulu KamAZ-6522. izici Technical weloli, ngisho sokubukeza kafushane asivumela ukunikeza ukuhlolwa ngokuvamile omuhle.
Inama izinjini yesimanje nokunokwethenjelwa KAMAZ, amandla lapho, kuye ngokuthi ukumiswa, ezisukela 320 kuya 400 hp, izinjini ukuhlangabezana namazinga ukusebenza kwemvelo Euro-3. Ngezinye ithwele umthwalo omningi, ijubane esiphezulu ingeqi 90 km / h. Climbing engela kokuphakama iwukuba 25 °, endaweni engaba turning - 11.5 amamitha. Isisindo lomgwaqo we KamAZ-6522 - amathani 13,95 umthamo - ezingamathani angaba ngu-19. Le ngxenye avaliwe ivolumu inkundla 12 M3, ephakamisa imishini ivumela ukukhulisa yesikhulumi 50 °.
Njengoba imoto ukuthutha izimpahla ngobuningi nemvelo, lo mshini kakhulu kukhanga abathengi ezingaba khona. Okokuqala, lokhu kungenxa amathuba amahle nomthamo yesikhulumi umzimba. Okwesibili, idrayivu edonsa ngawo wonke amasondo ivumela imoto bahlinza ezihlukahlukene imigwaqo, kungakhathaliseki izimo zezulu. mncintiswano eqondile "KAMAZ" imikhiqizo kuphela Minsk imishini imoto ifektri njengoba babe engaqhathaniswa amazinga intengo nemitfombolusito ukuxhashazwa. Nokho, "KAMAZ" izimoto zisabalele futhi ububanzi eside. Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi Kwimakethe uvunyelwe ukuthola yokulahla iloli KAMAZ-6522 amakhasimende ayo.
College Road (Ekaterinburg): abafundi okukhethekile kanye nokubuyekeza
Inani labantu base-Tyumen - idolobha elikhulu lezimboni eSiberia
Kagava Sindzi - engcono footballer Japanese